नेपालको कानुन तथा न्याय प्रणालीमा मुलुकी ऐन लगायत १३ ऐनहरु र अन्य धेरै ऐनका थुप्रै दफाहरुलाई प्रतिस्थापन गरेर रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट २०७४ सालमा जारी भई २०७५ साल भाद्र १ गते बाट लागु भएको देवानी तथा फौजदारी संहितामा विवाहवारीका सम्बन्धमा केही पुराना व्यवस्थाहरुको निरन्तरता र केही....
न्यूजलय आइतबार १७, असार २०७५
असारमास रोपाईका बेला गाउने यस्तै गीतहरुले खेतबारीको रमाइलो दृष्यमा रोपाई चल्ने गर्थ्यो । हिलो खेल्दै खेल्दै बिउ काढ्ने, बाउसे रोपार र गोरुले जोतेको दृष्य नै बेग्लै....
न्यूजलय सोमबार ०७, जेठ २०७५
इटहरी । प्रदेश नं १ मा इटहरी मात्र यस्तो उपमहानगरपालीका हो जहाँ फोहोरकै विषयमा राजनीति भइरहन्छ । बिहानदेखि साँझसम्म फोहोर उठेन, ढल जाम भयो, यता गन्हायो उता गन्हायो भनेर चर्चा हुने गर्छ । झन्डै प्रदेशको राजधानी भएको इटहरीले आफ्नो क्षेत्रमा उठेको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेको....
अचानक तपाईं उपचारको लागि बेलायत गएको खबरले हामी मर्माहत भएका थियौं । त्यो समयमा अनेक हल्ला चले । जस्तो, तपाईंलाई पित्तनलीको क्यान्सर भएको, पित्तथैलीको क्यान्सर भएको, प्यान्क्रियाजको क्यान्सर भएको, यहाँ उपचार सम्भब नभएकोले बेलायत गएको आदि....
आफूलाई जन्म दिने....
स्थानिय सरकारको गेट अगाडी उभिएर धर्ना दिने र....
एकता जहाँबाट सुरु भएको छ त्यहीँबाट राजसंस्थाको बिजारोपण पनि भएको छ । इतिहासले राष्ट्रिय एकता कसले गर्यो ? त्यसको लेखाजोखा गर्ला त्यो एकताले भित्र्याएको राज संस्थाले कति वर्ष बुवा, हजुरबुबाको योगदानकै कारण प्रतिफल खाए ? त्यसको लेखाजोखा पनि होला । तर आज एक्कासी अतिरञ्जित ढङ्गले....
नेपाली कांगे्रस अहिले बाम तालमेल र तिनका बीच हुने आगामी पार्टी एकता विषय विरुद्धका अनर्गल विचारको प्रवक्ता बनेको छ । भने बाम गठबन्धन तिनै झूट र फरेवको तथ्यपरक खण्डन गरिरहेको देखिन्छ । लाग्छ यी दुवैका बीच चुनावी दाहोरी चलिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति....
मेरो घर भोजपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगमा रहेको दुम्माना गाविसको वडा नम्बर ९ को आम्चोकमा पर्छ । तीन पाथी धान फल्ने बारीले धानेको ३ जना दाजुबैनीको परिवार छ । फुसले छाएको बाँसको टाटीले बेरेको घरमा बास छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले मेरो १८ वर्षको दाईले....
स्थानिय सरकार यतिखेर बजेट योजना बनाउन व्यस्त छ । सबैजसो नगरमा कुन कामको लागि कति बजेट छुट्याउने भनेर योजना बनिरहेको छ । बजेटमा आम्दानी र खर्चको अनुमान गरिन्छ । तर बजेट आम्दानी र खर्चको बाँडफाँड मात्र होइन, नगरले आगामी वर्ष के गर्ने भन्ने योजनाको विस्तृत....